Ngaba iMicrosoft ilahla i-Outlook? - Imicrosoft
Eyona > Imicrosoft > Imbonakalo yeMicrosoft ifunxa iimpendulo kunye nemibuzo eqhelekileyo
Imbonakalo yeMicrosoft ifunxa iimpendulo kunye nemibuzo eqhelekileyo
Ngaba iMicrosoft ilahla i-Outlook?
IMicrosoftuceba ukwenzaSusaye desktopImbonakaloiiapps ezixhasa usetyenziso lwewebhu emanyeneyo.5 kwinyanga 2021
Kutheni le nto i-outlook app imbi kangaka?
Eyona ngxaki inkulu ngeImbonakaloyeI-Androidkunye ne-iOS xa yayikhutshwa okokuqala yayikukushiyeka kokudityaniswa kwezixhobo zolawulo lwesixhobo esiphathwayo (i-MDM). Ngaphandle kolawulo oluninzi, i-IT ayinakho ukulawula ukuba zeziphi izinto abasebenzisi abanokukwazi ukuzenza kunye neusetyenziso-Ukubangela ukuba eminye imibutho ivalwe ukusetyenziswa kweusetyenzisozizonke.NgoJuni 4, 2015
Ulwazi lwenkqubo ye-aol
Wenza njani wonke umntu, ndinguThioJoe, kwaye namhlanje sijonga useto lwe-11 kwiGoogle Chrome onokuthi utshintshe.
Ezi inokuba zizinto ofuna ukuzicima okanye izinto ezipholileyo ezicinywe ngokungagqibekanga ofuna ukuzivula. Ngoku ndisebenzisa inguqulelo yama-63 ye-Chrome eyiyo inguqulelo yangoku ye-beta. Ukuba ulijonga kamva eli nqaku okanye awusebenzisi uhlobo lwe-beta, linokujongeka ngathi lihlukile, ungothuki.
Ndicinga ukuba uyakufumana ezi zinto zinomdla, kwaye ubhalise kwamanye amanqaku kwaye wenze izaziso ngokunqakraza intsimbi, okanye iYouTube ayizukubonisa amanqaku am amatsha nokuba ubhalisile kuba ialgorithm yeYouTube isemlilweni wokulahla inkunkuma. Ngapha koko, masiqale. Ukuqala, sinenqaku elinye endigqibele ukujonga ukuba likwimeko emiselweyo oya kuthi ufune ukucima.
Cofa kwi-Advanced, emva koko ujonge phantsi kweNkqubo ukhetho 'oluqhubekayo ngasemva ap.' ps ukuba iGoogle Chrome iyavala, 'andazi ngawe, kodwa xa ndivala uGoogle Chrome ndiyilindele ukuba ivalwe kungabikho zixhobo ezisebenza ngasemva endingenalo nofifi ngazo. Ndinyanisa ntoni? Ngaba ndifuna ukugcina ii -apps zesikhangeli zisebenza nokuba andisisebenzisi isikhangeli? Ewe ewe, ndingakukhubaza kwaye ndigcine ezinye izixhobo zenkqubo.
Kulungile, inombolo yesibini, ikwiphepha lesethingi nalo, kodwa ngeli xesha liphantsi koBucala noKhuseleko. Jonga useto 'Ngokuzenzekelayo thumela ulwazi lwenkqubo kunye nomxholo wephepha kuGoogle ukufumanisa iiapps eziyingozi kunye neewebhusayithi'. Oku kukhubazekile ngokungagqibekanga, kodwa ngokobuqu ndicinga ukuba kufanelekile ukwenziwa.
Ukuba unolwazi oluyimfihlo awunyanzelekanga, kodwa zininzi iiwebhusayithi ezinobungozi ngaphandle apho ukuba abantu abaninzi bayaluvula olu cwangciso, uya kuxhamla kulo kwixa elizayo - iChannel isethubeni lokufumana iwebhusayithi entsha enobungozi. undwendwela, kwakhona ukuba khange isikishwe. Kulungile. Ngoku zonke ezinye iisetingi esiza kudlula kuzo zikuluhlu lwemenyu efihliweyo ebizwa ngokuba yiMenyu yeeFlegi yeChannel.
Ukufika apho kulula ngenene, vele uye kwi-bar ye-url uze uthayiphe chrome: // iiflegi kunye nohlobo lokubetha. Iya kukuxwayisa ukuba ezi ziimpawu zovavanyo. Ke, kungcono ukuba ungavuli amanqaku kwaye ucime ngokungacwangciswanga ngaphandle kokwazi ukuba benza ntoni.
Ke kwinombolo 3, ujonge useto olubizwa ngokuba 'bonisa amaqhosha okugcina iikopi'. Ungayikhangela phezulu okanye ucofe i-Ctrl + F kwaye ungene apho ungalayisha ugcino lwewebhusayithi ukuba loo webhusayithi iyasilela ukulayisha okanye awukho kwi-intanethi ngoku. Ukubenza bakwazi, yiya ezantsi kwaye ukhethe 'eziziintloko'.
Ngale ndlela, ubuncinci unokujonga kwinguqulelo yangaphambili yewebhusayithi nokuba ayihlali, enokuba luncedo. Ukuba oku kuhlolwe, oku kungaphumeleli kokulayisha iphepha, uya kubona iqhosha lokulayisha ikopi egciniweyo. Ukuba uyazibuza ukuba kuthetha ntoni ukhetho lwesibini, lutshintsha nje ukuba uLayishe ikopi yeqhosha isekhohlo okanye ngasekunene ukuze ingabinamsebenzi, inombolo elandelayo 4, le ilungile ngenene, ibizwa ngokuba 'kukhutshelwa ngokufanayo '.
Ke jonga le uyenze isebenze. Oku kuvumela i-Chrome ukuba isebenzise imicu emininzi yokukhuphela ukukhawulezisa ukhuphelo lwefayile Ukunciphisa isantya apho unokukhuphela khona ifayile, i-Chrome inokukhuphela ngokusisiseko iindawo ezininzi zefayile ngokuhambelana, ukunciphisa isantya sokukhuphela kwiqhezu elinako. Akukho maxwebhu maninzi kolu phawu andiqinisekanga ukuba lusebenza kakuhle kangakanani, kwaye ukuba lwenzeka ngalo lonke ixesha, kodwa andiboni sizathu sokuba ungayenzi ngaphandle kokuba uneengxaki okanye into .
Ngendlela, kukho izongezo ezinokuyenza le nto, andizukungena kuzo kuba zingaphaya kwenqaku, kodwa ungazijonga. Benze bangafuneki kwaye basebenze ngaphandle kwezandiso. Kwinombolo yesi-5, jonga useto olubizwa 'Smooth scrolling'.
Kutheni i-Outlook icotha kangaka ngo-2020?
NiniImbonakaloinemicimbi yokusebenza, inokubangelwa nokuba yifayile yePST eyonakeleyo okanye eyonakeleyo, ukongeza okungasebenziyo, iprofayili eyonakeleyo, okanye ingxakiImbonakaloisicelo.21 engwe. 2020
- Eli nqaku linikezelwe kuwe nguLuka.
Nge-Woven, unokufikelela kuzo zonke iikhalenda zakho endaweni enye kwaye ube nezixhobo zokucwangcisa ezinamandla zokukunceda ugcine ixesha. Hlala ubukele kude kube sekupheleni kwenqaku ukuze ufumane okungakumbi. Ngaba uyafuna ukuchitha imali encinci? Ixesha lokulawula ishedyuli yakho? Ngaba ufuna ukujongeka njenge pro xa kufikwa kulawulo lwekhalenda ye-Outlook? Ewe, kwinqaku lanamhlanje, ndiza kwabelana nawe ngeengcebiso zam ezisixhenxe zokulawula ikhalenda yakho apha kwiMicrosoft Outlook.
Molweni nonke, Scott Fries en here at Simpletivity to help you to get more done and be less stressing. Kwaye masihle singene ngenqaku lokuqala, sithetha ngonqumlo lwebhodi yezitshixo eya kusivumela ukuba siye kuwo nawuphi na umhla kwikhalenda yethu, konke okufuneka ukwenze kukukhetha u-Ctrl + G kwikhibhodi yakho kwaye uyakufumana oku ibhokisi yencoko yababini evelayo. Ngoku ekuboneni kokuqala ungacinga, oh, kunyanzelekile ndiyibeke kule? Fomati? Ngokuqinisekileyo akunjalo.
Masithi ndifuna ukuya ngqo kwi-27 kaNovemba. Ndichwetheza nje hayi. Nge-27 kaNovemba, hit Enter kwi-keyboard yam kunye ne-boom, lo ngumbulelo okanye ndingathi ngu-Black Friday kulonyaka uthile.
Masibethe uCtrl + G kwakhona kwaye masithi ndifuna ukuya kuMgqibelo olandelayo kwikhalenda yam. Ndiza kuchwetheza nje kwi-SAT, ndibethe Ngena kwikhalenda yam kwaye ndiza kukhethelwa uMgqibelo olandelayo ukusukela namhlanje. Ke, akukho mfuneko yokuba ufake nantoni na kumhla othile okanye kwifomathi yomhla othile njengoko ubona apha.
Njani ngoFebruwari 2021? Ndibetha nge-boom, ndiya kusiwa kwiveki yesibini apho. Ndicinga ukuba yeyesithoba ekhethiweyo kuba namhlanje yeyethoba, kodwa indifumene kanye ukuya kuFebruwari 2021 kwaye ndingabuyela umva nditsho nje namhlanje ukuba ndikwenye indawo ndibethe ukungena kwaye izakundibuyisela namhlanje. Ke oku kuya kukugcinela ixesha elininzi, le yiCtrl + G kwikhibhodi yakho.
Ngoku inqaku lesibini linento yokwenza nokuboniswa kwemimandla yexesha ngokuthe ngqo, apha kwicala lasekhohlo kwikhalenda yakho ungabonisa imimandla yamaxesha amaninzi. Ngokuzenzekelayo, ewe, indawo okuyo ibonisiwe l ixesha lendawo, kodwa uza kuthini ukuba usebenza ngokusondeleyo nomnye umntu okanye nabaxumi okanye osebenza nabo kwindawo eyahlukileyo yexesha? Ngaba bekungayi kuba mnandi ukuba nendawo enye okanye ezimbini ezongezelelweyo apha ngasekhohlo? Ukuze sikwazi ukwenza oko, kuya kufuneka sinyuke kwaye emva koko siye ezantsi kukhetho. Iya kuyivula le ngxoxo kwaye ngasekhohlo sifuna ukukhetha ikhalenda.
Ngoku singathanda ukuskrolela ezantsi kancinane kwimimandla yexesha. Ngoku kukho izinto ezahlukeneyo esifuna ukuzijonga apha. Inombolo yokuqala kukuba sinokongeza iilebheli kwimimandla yethu yexesha, kubandakanya esele ikho.
Ke ukuba ufuna ukukhumbula, mhlawumbi ndifuna ukubeka iPacific apha ukuze ndazi umahluko phakathi kwelo xesha lexesha. Kodwa apha ndingabonisa indawo yesibini, ke ndiza kuyijonga le bhokisi kwaye sele ikhethwe eMpuma kum kwaye ilungile, ndihlala ndisebenza nabaxhasi abaninzi kunxweme olusempuma ukuze ndikhethe ixesha lempuma . Kwaye ukwenza nje kube lula kum ukubona oku kwinqanaba lam ndar, ndichwetheza eMpuma, igcinwe intle kwaye imfutshane ukuze ndiyibone kwikhalenda yam.
Into ekufuneka ndiyenzile kukuhla apha phantsi kwaye nditsho, kulungile, kwaye ngoku ngasekhohlo. Ndinemimandla emibini yexesha lam. Ndiyayibona indawo yam yexesha lendawo apha, eboniswe ngqindilili apha, kodwa ndinalo nexesha lam lasempuma apha.
Ke xa ndijonga ikhalenda yam kwaye ndicinga ngokwenza enye? Ukutyunjwa ukuqinisekisa ukuba, ewe, ngo-2: 00 ntambama Kulungile nam, kodwa mhlawumbi oku kuthe chu emva kwexesha kwabanye babalingane bam abakwindawo yexesha lasempuma.
Okulandelayo kuluhlu lwethu, singathanda ukujonga ikhalenda yethu ngendlela eyahlukileyo, ngakumbi xa sijonga ikhalenda yethu xa sijongana ne-imeyile, kuba masijongane nayo, ukuba ulapha kwi-Outlook, mhlawumbi ukuchitha ixesha elininzi kwi-inbox yakho hayi kwikhalenda yakho kuphela, kodwa oku kungatya ixesha ukubuyela umva, akunjalo? Ukucofa apha, cofa kwikhalenda, yiza apha kwaye ucofe apha uze ubuyele kumbono wakho apha kwi-inbox, kulungile, ungafumana umbono omncinci wekhalenda yakho kunye neshedyuli yakho yonke apha Bona Indawo ye-imeyile ye-Outlook. Ukwenza oko, singathanda ukuza apha kwaye ukhethe ukujonga. Kwaye emva koko, kwicala lasekunene leribhoni yakho, uya kuyibona le ndawo iyilwayo apha.
Ngoku kukho enye ebizwa ngokuba yi-do-do bar kwaye isenokungabi yeyona ilebheli ilungileyo apha kuba iyakusibonisa okuninzi ngakumbi kunoluhlu lwezinto esiza kuzenza. Sinokukhetha ukujonga uLuhlu lweTo-Do. Kodwa xa sikhetha olo khetho sinezinto ezintathu esinokukhetha kuzo; Ikhalenda, aBantu, iMisebenzi, okanye Valiwe.
Kule meko, ndifuna ukukhetha iKhalenda kwaye ngoku ngasekunene, ndinomfanekiso weKhalenda yam, kodwa kuya kuba ngcono. Ayisiyi kuphela ukuba ndinganyuka apha kwaye ndikhethe imihla ethile kwaye ndibone ukuba ishedyuli yam ijongeka kanjani, kodwa njengoko ubona ukuba ndingena namhlanje iyandibonisa i-ajenda yokujonga iikhalenda zam. Ke ndinokukhawuleza ndibone ukuba yintoni eza kuza namhlanje kwaye ndizothini kule veki iphela, kufuneka ndiyitshintshe le ngxoxo, okanye mhlawumbi ndifuna ukubona iinkcukacha ezithe vetshe ngayo, kufuneka nje ndicofe kuyo kwaye izakuvulwa kanye apha, andizukuza kwikhalenda, akunjalo? Khange nditshintshele kumbono wekhalenda, kodwa lo msitho uvuliwe.
Ndingongeza indawo, nditshintshe umhla, ndongeza abamenyiweyo, ndenze nantoni na endiya kuyenza rhoqo. Kwaye xa ndigqibile ndingacofa Gcina kunye nokuVala okanye ndingavala apha ukuba bendifuna ukufumana ulwazi oluthe kratya kwaye ndibuyile kuloo mbono. Isakunika indawo eninzi, indawo eninzi yokusebenza kwi-imeyile yakho kwaye ujonge ibhokisi yakho engenayo, kodwa umbono oluncedo oluncinci ukuze ubone i-imeyile yakho apha kwi-Outlook.
Sihlala kwiphepha le-imeyile apha, nokuba eli linqaku malunga neengcebiso zekhalenda, ndingathanda ukukubonisa indlela yokwabelana ngekhalenda yakho nomntu nge-imeyile, kwimeko apho kufuneka sikhethe oku apha ukuya kwisithethe sethu ifomathi enye okanye esemgangathweni. Kwaye ndiza kuqamba umyalezo omtsha. Kwaye kunjalo.
Ayinamsebenzi ukuba ndithumela bani kulo mzekelo, ndingathanda ukuya emzimbeni we-imeyile uqobo. Mhlawumbi ndiza kubhala into kwaye ndibaxelele, 'Hayi, jonga nje ngezantsi. Yile nto ishedyuli yam yale veki izayo.
Kukuthini ukufumaneka kwakho okanye leliphi kula maxesha elilungele wena? Ukwenza oko kuya kufuneka sifake apha kwaye ungabona kweli candelo lokuqala apha Faka, kukho enye ebizwa ngokuba yiKhalenda. Ke ndiza kuyikhetha le. Unokukhetha ikhalenda efanelekileyo ukuba ulawula iikhalenda ezininzi.
Ndiza kusebenzisa ikhalenda yam emiselweyo apha kwaye ungachaza uluhlu lomhla ngokunjalo. Ndiza kuthi kwiintsuku ezisixhenxe ezizayo, kwaye ndinokukhetha nenani leenkcukacha endifuna ukuzibandakanya. Ke ndinokubonelela ngeenkcukacha ezinqunyelweyo, iinkcukacha ezipheleleyo, okanye ukubakho nje.
Le yeyona nto ufuna ukuyisebenzisa ixesha elininzi kuba kubonakala ngathi ikhululekile kwaye ixakekile. Isinika abanye njengamahloni, sebenza kwenye indawo okanye ngaphandle ukuze ungaboni amagama eentlanganiso zakho okanye abamenyiweyo okanye nantoni na enjalo. Unokuthi kuphela ixesha lokubonisa ngaphakathi kweeyure zomsebenzi, ekunokwenzeka ukuba zilumkile, akunjalo? Awufuni ukuba umntu akhethe ixesha elingaphandle kweeyure zakho zomsebenzi.
Kukho iindlela ezimbalwa eziphambili apha, kodwa uninzi lwamaxesha ndihlala ndizisebenzisa kuphela kweli nqanaba. Ndiza kuthi kulungile, kwaye kuya kwenzeka ntoni kukuba kukho ikhalenda encinci kwisicatshulwa salo myalezo. Ngapha koko, ikhangeleka kakhulu njengombono we-imeyile, kodwa njengoko ubona nje ibonisa simahla kwaye uxakekile, ukhululekile kwaye uxakekile ukuze ujonge ngokukhawuleza, kulungile, ndiphakamile nge-10 kusasa malunga nobunzima iyure enesiqingatha ekhoyo, kuphela indawo enesiqingatha seyure apha kwaye emva kwemini.
Ke banokunditsalela umnxeba bathi, 'Hee, Scott, ukuba ...
ingalunga. Siza kudibana ngomhla we-10 ngo-3: 00 ebusuku. 'Okanye into enjalo.
Ndibanikile iinkcukacha ezaneleyo. Kodwa nalapha abazi ukuba ndidibana nabani okanye zithini izihloko zezi ntlanganiso. Ngoku ndizakuyivala le nto kwaye ndikubonise umzekelo wento efunyanwa ngumntu kwelinye icala.
Kwaye ndicinga ukuba kuhle kakhulu kuba ufumana uhlobo lwekhonkco elinamandla apha. Ukuba ujonga le khalenda incinci kwaye ufuna ukuthi, 'Uyazi yintoni, ndi, ndifuna ukudibana ngomhla we-13.' Ungacofa kule-13.
Oko kuyokutsiba apha phantsi kwaye ungabona ngokukhawuleza ulwazi lwam olukhululekileyo noluxakekileyo. Indlela entle yokwabelana ngokufumaneka kwakho nomntu ongaphandle kombutho wakho. Ngoku masibuyele kwikhalenda ngokwayo kuba le ilandelayo yinto ebendingayazi, kodwa ndiyifumana inamandla kwaye inokutshintsha indlela ojonga ngayo ikhalenda yakho.
Inento yokwenza nekhowudi yemibala okanye nayiphi na enye into ongathanda ukuyenza kwikhalenda yakho kwaye uyenze ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela, awudingi ukuchitha ixesha lakho ukhetha umbala othile okanye udidi lwegup kuyo yonke intlanganiso oyenzayo okanye oyifumanayo kwabanye abantu. Apha ungawubona lo mzekelo.
Ndinoluhlaza njengombala wam ongagqibekanga kwiintlanganiso ezininzi. Mhlawumbi ezimfusa zizinto zobuqu ezifana nesi sidlo sasemini kwaye nantoni na enxulumene neseshoni yokucebisa ibomvu. Kodwa endaweni yokuchitha ixesha lam ndingena kwiseshoni yokucebisa kwaye ndiyitshintshe ukuze ndifumane ixesha lokufumana iingcebiso, jonga oku.
Ndiza kwenza iintlanganiso ezimbini ezahlukeneyo ukuze ubone oku ngexesha lokwenyani. Ke masithi ndiza kwenza intlanganiso entsha apha. Ndiyibiza nje ngentlanganiso entsha.
Ke andenzanga nto, akunjalo? Ndithetha nje intlanganiso entsha. Ndithi gcina uvale. Kukho umbala wam omdaka oluhlaza, kodwa ndiza kudala enye intlanganiso apha.
Kwaye oku ndizakubiza, iseshoni yengcebiso. Kwakhona, akukho nto yenziwe, inikwe nje igama. Ndiza kudibana, gcina kwaye uvale.
Kwaye lo ubomvu. Hee kwenzeka ntoni phaya andikhethanga bomvu. Hayi, kungenxa yokuba ndisebenzisa ukufomatha okunemiqathango apha kwi-Outlook, ethi nanini na kweli xesha, iseshoni yokubonisana ifakiwe kwitayitile yokuqeshwa, ikwenza ukutyunjwa kubomvu ukuze kubonakale.
Ukwenza oku kwenzeke, singathanda ukuza kwiribhoni yethu kwaye sikhethe umbono. Kwaye emva koko sifuna ukukhetha useto lokujonga. Ngaphakathi kolu seto lwencoko yababini sithanda ukuza kwiFomathi enemiQathango.
Nanku umthetho wokuqala endiwuzisileyo. Ibizwa ngokuba yiSeshoni yokuNxibelelana. Ngokwenene eli ligama nje.
Siza kuyikhetha imeko yethu kwenye indawo, kodwa nantsi uyabona ndikhethe umbala obomvu. Ngoku masongeze entsha ukuze uyazi ukuba ungayenza njani. Ndikhetha iqhosha lokongeza kwaye siza kulinika igama.
Kule meko, ndiza kuyibiza ngokuba yintlanganiso yeTrello, kulungile? Intlanganiso eneTrello egameni layo, ndifuna ukuyinika umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, njengesicelo seTrello. Ke ndiza kuyibiza ngokuba yi-Trell o Hlangana kwaye ndiza kukhetha lo mbala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala endifuna ukuwusebenzisa. Ngoku khumbula, ligama nje elo.
Asikayibeki imeko okwangoku. Ukwenza oko, masize apha kwaye ukhethe imeko yeqhosha, eliza kuvula incoko yababini entsha. Ke apha phezulu ndiza kuthi, khangela amagama Trello, kwaye ndinokukhetha ukuba nayo kuphela kwisifundo xa ndiyifuna kumhlaba wenqaku, xa ndifuna nakwezinye iindawo.
Kule meko, ndiyifunayo nje kumxholo. Ngoku igama lesifundo lisetyenzisiwe kuba le yimenyu efanayo onokuyisebenzisa kwiphepha le-imeyile ye-Outlook. Kodwa khumbula, isifundo ngokuyintloko sithetha igama lokuqeshwa okanye umcimbi.
Ngoku ndinokukhetha ezinye iindlela ngokubhekisele kumbutho, ngubani owawuququzelelayo, kunye nabanye abathathi-nxaxheba. Kukho ukhetho oluninzi ngaphambili, kodwa masigcine ilula kulo mzekelo. Ndiza kufumana amanqaku kakuhle kule meko kwaye ndiza kuphinda ndiphumelele kwakhona.
Siza kufumana amanqaku apha okwesithathu. ukuvala le bhokisi yencoko yababini kwaye uyivavanye kwaye ubone ukuba iyasebenza. Ke apha ngolwesiHlanu, masenze umsitho omtsha kwaye ndiza kuthi, umzekelo, yintlanganiso yeTrello noBob.
Ndicinezela ukugcina kwaye ndivale kwaye ifumene ngokuzenzekelayo ileyibhile eblue. Okulandelayo kuluhlu lwethu, masiqwalasele ukuba i-imeyile ijika ngokukhawuleza kangakanani na, kuba masijongane nayo, mhlawumbi uchitha ixesha elininzi kwiphepha le-imeyile le-Outlook kunakwikhalenda uqobo. Kodwa masithi umntu undithumelele umyalezo onje kwaye uza nedatha elungileyo okanye ulwazi.
Kwaye ndifuna ukubanakho ukudala intlanganiso ukuze sikwazi ukuthetha ngayo. Ukuguqula oku kube kukuqeshwa, konke ekufuneka ndikwenzile kukuthatha i-imeyile, ucofe ubambe, kwaye ndiyirhuqe ngaphezulu kwe icon yekhalenda apha ngasekhohlo. Xa ndiyiyeka, idinga elitsha lenziwa ngesihloko sale imeyile ngoku ukuba sisihloko sokuqeshwa kunye nayo yonke into ekule imeyile ibhalwe apha ngezantsi, nantsi itafile ebendithethe ngayo ngaphambili.
Konke kulungiselelwe mna naye wonke umntu endimemileyo kule ntlanganiso, singabhekisa kuyo kunye ngoku, nokuba kungaphambi kwexesha okanye ngexesha lentlanganiso uqobo. Ke ndizakuyivala le. Kwakhona, ungarhuqa nayiphi na i-imeyile, cofa nje kwaye uyihudule ngaphezulu kwekhalenda yekhalenda kwaye iya kuguqulwa ngokuzenzekelayo ukuze wenze idinga elitsha.
Okulandelayo, kuya kufuneka ukongeza imihla ebalulekileyo kwikhalenda yakho kuba ndifuna ukuqinisekisa ukuba awuphoswa nayiphina into ebalulekileyo, ngakumbi xa ujongene nomntu ongaphandle kwelizwe lakho, okanye ngaphandle kwenkolo yakho okanye indawo yejografi, kwaye inento yokwenza nokongeza iiholide kwikhalenda yakho, ungandibona ndilapha. Ndizidwelisile zombini iiholide zaseCanada naseMelika apha, kodwa khange ndizongeze ezi. Hayi, ndifuna ukuba i-Outlook indenzele umsebenzi onzima.
Ke kule meko kufuneka siye kwiFayile. Sibuyele emva kukhetho kwaye ewe siza kukhetha ikhalenda apha nd phantsi kwemenyu yeeKhalenda yesibini esifuna ukuza kuyo apha kwaye ungabona ukuba singazongeza njani iiholide kwikhalenda. Ke xa sicofa eli qhosha sifumana incoko yababini apha.
Ngoku kukho indibaniselwano yamazwe omabini. Kukho iiholide zonqulo. Kukho izinto ezahlukeneyo ezahlukeneyo.
Umzekelo, ezinye izinto zinokuthi ngqo kwiVictoria City. Kukho itoni yezinto ezahlukeneyo oza kukhangela apha, kodwa konke okufuneka ukwenze kukukhetha ezimbalwa ezibalulekileyo kuwe; ezo ufuna ukuzongeza kwaye ucofe u-OK kwaye ziya kongezwa kwikhalenda yakho, ngoku ukuba ukhona Ukuba ufuna ukufikelela kuzo zonke iikhalenda zakho endaweni enye, ndincoma ukuba ujonge i-Woven. Ngolukiweyo unokuzisa zonke iikhalenda zakho zikaGoogle kunye neMicrosoft kunye kwimbono enye.
Bayakuvumela ukuba wenze iithegi zesiko ukuze ugcine umkhondo wayo yonke into oyenzayo kwiveki enikiweyo kwaye uchwetheze into enye kaninzi. Ikwabandakanya izixhobo ezinamandla kakhulu zokucwangcisa ukuze ungasebenzisi ii-apps zomntu wesithathu. Ukuba ungathanda ukuziluka ngokwakho, yiya ku-wood.com okanye ubone ikhonkco kwinkcazo engezantsi.
Ngaba imbono ilungile okanye imbi?
Omnye umboneleli ngenkonzo ye-imeyile yasimahla nguImbonakalo.com kwiMicrosoft. Olu khetho luvela kubuchwephesha beMicrosoft. Ukuba ishishini lakho elincinci likhangela inkonzo yasimahla ye-imeyile, uya kufuna ukuqaphelaImbonakalo.Imbonakalo.com yenye yeendlela ze-okona kulungileyoIinkonzo ze-imeyile zamahhala.NgoFebruwari 23 Ngo-2017
-Molo uPete Moriarty apha, namhlanje uza kukunceda ukuba kutheni ungafanele usebenzise iakhawunti ye-Gmail kwidatha yakho yeshishini. (Ukonwabela umculo we-elektroniki) Amaxesha ngamaxesha xa sisebenza nabathengi beza bathi, Sele ndikhona kuGoogle kwishishini lam kwaye kufuneka sizibuze kwaye sibuze, ingaba usebenzisa igama lakho lesizinda? Ngaba ubhatalela iGoogle Apps okanye iakhawunti yeG G? Kwaye umthengi uthi, hayi, ndisayine i-Gmail, ayinguye wonke umntu oyifumana simahla? Kwaye kubonakala ngathi sifumanisa ukuba umthengi usandula ukubhalisela iakhawunti ye-Gmail kwaye ngaphakathi kwiakhawunti ye-Gmail une-Well, kukho iindlela ezimbalwa onokuthi udibanise iakhawunti yakho yeshishini kwiakhawunti yakho ye-Gmail, kwaye zeziphi iinkampani ngamanye amaxesha ezenzayo thumela ii-imeyile zabo okanye usete inkqubo yokubuyisa ukuze bangene kwaye baphume kwiGmail yeGmail inyamalale iakhawunti kaGoogle, basebenzise iakhawunti gmai ngokufanelekileyo l.
Kwaye eyona ndlela ilula yokuxelela ukuba usebenzisa iG Suite, eluhlobo lweshishini lukaGoogle, okanye ukuba usebenzisa enye yeakhawunti yabathengi bakho, yiGmail kuphela, kukujonga ukungena kwakho. Ukuba uya kuGoogle kwaye ungene xa ungena ku- @ gmail.com usebenzisa iakhawunti enye ye-Gmail; ukuba ungena ngegama lakho lesizinda somsebenzi kwaye uvule i-Gmail okanye amaXwebhu okanye iDrive kwaye wena ukuba unegama lesizinda somsebenzi apho oko kuthetha ukuba usebenzisa iG Suite, eluhlobo lweshishini lukaGoogle.
Ngoku makhe sithethe ngomngcipheko wokusebenzisa ingxelo yobuqu ye-Gmail. Ngoku i-Gmail iqalile njengenkonzo yomthengi kwaye icacile ukuba isimahla, uGoogle uyayixhasa loo nto ngentengiso, icacile. UGoogle akenzi izinto ezimbi ngedatha yakho, kodwa ngokuqinisekileyo bayayisebenzisa loo ntengiso kunye nokufumana uhlalutyo malunga nabasebenzisi babo ngayo banokuphucula imveliso kunye nokuphucula ukuthengisa kwabo.
Ewe, kwiakhawunti yobuqu, kuba kukho iiakhawunti ezingaphezulu kweebhiliyoni ezimbini ze-Gmail, awukho umgca wenkxaso, ngokwenene. Banenkxaso ye-imeyile, kodwa ngenxa yokuba zininzi iiakhawunti, phantse akunakwenzeka ukuba uGoogle abonelele ngayo, yithi, inkxaso enikezelweyo kule mveliso. Ke ukuba kukho into engahambanga kakuhle ngeakhawunti yakho ye-Gmail kwaye umzekelo awukwazi ukungena, uphulukana nokufikelela, mhlawumbi kungenwe kuyo, mhlawumbi umntu othile uyayikhupha ezandleni zakho, akukho ndlela ilungileyo yokuyibuyisa, apho akekho umntu ovele athabathe umnxeba aze afowunele xa into enje ingahambi kakuhle.
Ngoku singabuyisela iiakhawunti ze-Gmail amaxesha ngamaxesha ukuba kukho ingxaki, kodwa ixesha elininzi iakhawunti enye ye-Gmail ihambile, emva koko ihambile. Ke ukuba ayikacaci into yokuba ukuba ugcina idatha yeshishini kule akhawunti ye-Gmail, ngumngcipheko omkhulu kuba xa iakhawunti ye-Gmail ishiya ulutsha, ungangena kwiingxaki ukuba ulahlekelwe yiyo yonke idatha yeshishini, ewe Ngokuqinisekileyo kukho izisombululo ze-Backup, kodwa mhlawumbi andifuni ukuyithemba iakhawunti ye-Gmail ngakumbi ukuba une-imeyile yokungena kunye nokungena kwishishini lakho elikwenza konke oku Sebenzisa iakhawunti ye-Gmail njengokungena kwakho. Olunye uncedo lokusebenzisa iakhawunti yomsebenzi we-G Suite endaweni yeakhawunti ye-Gmail ijongeka ingcali.
Ukuba uqhuba ishishini kwaye usebenzisa iakhawunti enye ye-Gmail kuyo yonke i-imeyile yakho, abathengi baya kuyibona loo akhawunti. Kwaye ungathi uPeter, ndithumele i-imeyile yam yomsebenzi kwi-Gmail kwaye emva koko ndithumela kwidilesi yam ye-imeyile yomsebenzi. Ewe, oku kuyasebenza xa usenza iqhinga lokudlulisela phambili, kodwa ukuthumela isimemo sekhalenda esivela kwikhalenda sisaya kuthumela iakhawunti yakho ye-Gmail kubathengi bakho.
Ke ayikhangeleki ingcali. Ukuba uqhuba ishishini, kuya kufuneka usebenzise iG Suite kwidatha yakho. Ngoku makhe sithethe ngezinye zezibonelelo zokusebenzisa iG Suite kwidatha yakho.
Ngaphandle kolawulo lweakhawunti yakho kaGoogle oko kuthetha ukuba xa useta abasebenzi, useta iikontraki, okanye useta omnye umntu kwinkampani engenguwe, nguwe olawula iakhawunti yabo. Abanini bamashishini abaninzi abasebenzisa idilesi enye ye-Gmail kuyo yonke idatha yabo yeshishini, uye wabelana ngefolda nomnye umntu kuGoogle Drayivu, omnye umntu ubeka into kwiakhawunti yakhe ye-Gmail kule folda, kwaye bahlala bengabanini bale fayile oko kuthetha angayicima loo fayile nanini na kwaye pof, iyanyamalala kwiakhawunti kaGoogle kwaye emva koko ihambile, ke awunakulawula ngokwenyani okwenziwa ngabanye abantu, kwi-G Suite nguwe olawulayo ngoku. unokwabela iiakhawunti, ungongeza okanye ususe abantu abahlukeneyo kwiakhawunti ye-G Suite ngokudlula kwiphaneli yolawulo. kwaye ke lonke ukufikelela kwidatha yeshishini lakho kulawulwa nguwe.
Oko kuthetha ukuba unakho konke ukhuselekile kwaye utshixiwe. Ke xa wabelana ngeefayile, yonke into kwinkampani yakho ikhuselekile. Kwaye ukuba uneqela elandisiweyo lomsebenzi-ngathi usebenzisa iidrive ezikuvumela ukuba uzenze nezinto ezipholileyo, ezinje: Umzekelo, vumela abasebenzi bakho babeke iifayile kwifolda, kodwa ungazicimi iifayile kwifolda.
Ungayisebenzisa ukutshixa zonke iintlobo zezinto ezipholileyo ngaphakathi kwiakhawunti yegoogle, unokufumana inkxaso. Ngoku ukuba ungene ngqo kwiGoogle ufumana ukufikelela kuGoogle inkxaso. Ukuba uqhakamshelana nomntu ofana nathi kuleGenius ikunika ukufikelela kwinkxaso yeprimiyamu kwaye oko kuthetha ukuba ungade ube nokufikelela kwigama lakho lesizinda, uhlala ufikelela kwiakhawunti yakho kaGoogle.
Kunqabe kakhulu, kunqabile ukuba uGoogle avale iakhawunti okanye into ikhubazeke. Ngokwesiqhelo ekuphela kwexesha umntu aphulukana nalo ukufikelela kwiakhawunti yakhe ye-G Suite kuxa belibele ukuhlawula ityala. Kodwa ukuba kukho into eyenzekayo kwaye ngesizathu esithile uGoogle uyayivala iakhawunti yakho, okanye umqeshwa akuvalele ngaphandle, okanye umntu othile azame ukungena kwiakhawunti kwaye ebe ukufikelela kwidatha yakho, okoko ulawula igama lesizinda sakho ukusebenzisa iqabane njengathi kunokusebenza ukufikelela kwiakhawunti yakho.
Kwaye ekupheleni kosuku, ukuthembela kwiakhawunti ye-Gmail kuyaphambana, kwaye ndithetha ngeakhawunti ye-Gmail yobuqu kunye nedatha yeshishini lakho. Ukuba ubeka ishishini lakho emngciphekweni, idatha yeshishini lakho isemngciphekweni. Kwaye kwiidola ezimbalwa ngenyanga kwilayisensi zeshishini ngeG Suite, kunye nazo zonke ezinye izinto zokusebenzisa iakhawunti yeshishini likaGoogle, nguwe olawulayo kwaye unokufikelela kwinkxaso kwimeko apho kukho into engahambanga kakuhle, yiyo loo nto, xa ufuna uncedo ngeakhawunti yakho ye-G Suite, okanye ukuba ngoku usebenzisa iakhawunti ye-Gmail kwaye ukhathazeke kancinci ngayo, ndingacebisa ukuba utshintshele kwiG Suite kwaye ndingacebisa ukuba uhambe nomnye amaQabane asebenza kunye ukwenza le.
UGoogle ubonelela ngezikhokelo kunye noosiyazi, kunye nezikhokelo ngamanyathelo ngendlela yokusebenzisa iG Suite, kodwa bayaphoswa ngamanyathelo, kwaye ukunyaniseka, ukuba ungumnini weshishini akulunganga ukuchitha ixesha lakho ukonwabisa Ukuba uzama ukuseta iG Suite ngokwakho, kungcono ukuyidlulisela komnye umntu osele eyenzile amaxesha asisigidi kwaye wazi zonke iinkqubo kwaye unokukuxhasa ekuphenduleni imibuzo. Ke ukuba yile nto unomdla kuyo, ndwendwela iwebhusayithi yethu, itgenius.com, kwaye iqela lethu liya konwaba ukunceda.
Nokuba ungaphi emhlabeni, sinokukunceda ngeAkhawunti yakho kaGoogle kwaye ukuba uyayidinga nceda unxibelelane nathi. Kude kube kwinqaku elilandelayo, jongani, vuyani. (umculo omnandi we-elektroniki)
IMicrosoft yenza njani ukujonga kube lula ukuyisebenzisa?
Xa uMicrosoft wenza uguqulelo olunomdla kunoluhlobo lwe-Outlook (ndixoleleni ngelixa ndilila), enye yeendlela ezenze ukuba i-Outlook ibe lula ukuyisebenzisa kumacwecwe abandakanya UKWENZA I-MENU TAB NAMES YONKE I-CAPS. Eso inokuba sesona sizathu silihlwempu sokuphucula ukuhamba kwebala oke kwenziwa.
Kutheni le nto imbonakalo imbi kangaka kwikhompyuter yam?
IMicrosoft Outlook phantse ibe ikuyo yonke indawo kwikhompyuter yekhompyuter- kwaye, kubonakala ngathi iyinto ethukisiweyo kwindalo iphela. I-Outlook inezinto ezingenakubalwa, ukusukela ekuqokeleleni i-imeyile ukuya kwikhalenda, ukulandelela umkhondo, ukwenza uluhlu lwezinto kunye nokunye-ukanti ukutyekela kwayo kubumbano, ukonqena kunye nokungathembeki kunokwenza ukuba ube maddening ukuyisebenzisa.
Kufuneka wenze ntoni ukuba i-Outlook 2013 ayisebenzi?
Ubona impendulo ye-Outlook 2013 xa isenzo esingagqibekanga seentlobo ezithile zonxibelelwano siphazamiseka. Isisombululo esilula: Yiya kwinqaku le-KB 310049 kwaye usebenzise ukuyiLungisa. Oko kuseta zonke iinkqubo ezinxulunyaniswa nokunxibelelana okungachazwanga.
Ungayiphelisa njani i-Outlook eyongezayo?
Okulandelayo, bulala nayiphi na into eyongezwayo ongayidingiyo, njengoko kucacisiwe kwiNgcaciso yeNombolo 5. Bambalwa abantu abaye baxela ukuba i-iTunes ifakela isongezo se-Outlook- nangona kungenxa yantoni le nto ingacacanga- kwaye ukuyicima ikhawulezisa i-Outlook.